China 10ml 25ml 45ml 65ml Custom Mini Clear Borosilicate Glass Test Tubular Bottle with Silver Cap For Rum Spirits အရက်အရက်ဝိုင် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Cui Can Glass
10ml 25ml 45ml 65ml စိတ်ကြိုက် Mini Clear Borosilicate Glass Test Tubular Bottle with Rum Spirits အရက်အရက်ဝိုင်အတွက် ငွေထုပ်
မျက်နှာပြင်ကုသမှု- ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း စသည်တို့။
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအမျိုးအစား- အလူမီနီယံဦးထုပ် ဝက်အူချောင်း
အသုံးပြုမှုများ- ရေမွှေး၊ ဆေးပြား၊ အမှုန့်၊ ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့။
အမည်- ရေမွှေးစမ်းသပ်ပြွန် ဖန်ပုလင်း
အနည်းဆုံးအော်ဒါအရေအတွက်: 2000 အပိုင်းပိုင်း
ခိုင်ခံ့သော အရည်အသွေးမြင့် မှန်နှင့် အလူမီနီယမ်ကာဗာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။သင်လိုချင်သမျှကို သင်နှင့်အတူ ယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ပုလင်းက ရေစိုခံပါတယ်။ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ်။
အတွင်း၌ထည့်ထားသော အရာများကို ကြည့်ရှုရန် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖန်ခွက်ကို အသုံးပြုသည်။ဖန်တီးမှုဝါသနာနှင့် အနုပညာအလှဆင်ခြင်းအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ဖန်အိုးများသည် လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အနုပညာလက်ရာများ၊ အသေးစား မော်ဒယ်များ ပြုလုပ်ရန် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
သတ္တုအလူမီနီယံအဖုံးပါသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖန်ပုလင်း။အစေ့များ၊ ဆေးများ၊ သကြားလုံးများ၊ နံ့သာမျိုးများ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ပုလဲများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကွန်တိန်နာ။အမှုန့် သို့မဟုတ် သေးငယ်သောပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။သင့်ရွေးချယ်မှု အဆင်ပြေစေရန်။
လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖန်စည်ပြွန်ကို အရည်၊ အမှုန့်နှင့် အခြားထုတ်ကုန်များကို လက်ခံရန်အတွက် စမ်းသပ်မှုများ၊ ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် 10ml 25ml 45ml 65ml စိတ်ကြိုက် mini transparent test tube borosilicate ဖန်ရေမွှေးပုလင်း
အသုံးပြုမှုအမည် Test tube ရေမွှေးဖန်ပုလင်း
စွမ်းရည် 10ML 25ML 45ML 65ML
ယခင်- ဝါးကလစ်အဖုံးပါသော အလုံပိတ် ဖန်ပုလင်းကို ဖောက်ထွင်းထားသော ဟင်းခတ်အစေ့အဆန်များ သိမ်းဆည်းခြင်း။
နောက်တစ်ခု: အသစ် 5ml 10ml 15ml ဇိမ်ခံဖန်ပုလင်း ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ရေမွှေးပုလင်း
အခမဲ့နမူနာ 30ml 50ml Spray အား ပြန်ဖြည့်နိုင်သော စိတ်ကြိုက်...
30ml 54ml 110ml လက်ကားဇိမ်ခံအထုပ်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ...
Hot Sale Skin Care Serum 30ml Blue Amber Green...
32ml 53ml 102ml လက်ကားဇိမ်ခံအထုပ်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ...
Luxury Round bottle PUMP SPRAYER Cylinder Glass...
ဒီဇိုင်နာ 35ml 47ml 50ml အလှဆင် Elegant Prem...
ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, Reed diffuser ပုလင်း, ဖန်ရည်ပုလင်းများ, ဘီယာ ဖန်ပုလင်း,